မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Pinocchio (K-drama Review)
Posted by mabaydar at 4:53 PM
ဝိုင်းလဲ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့လို့ အာ့စကြည့်နေပြီ ကြည့်မိတော့လဲ အော် မင်းသမီးလဲမဆိုးရှာပါဘူး သူ့ဟာနဲ့သူ cute ဖြစ်တာ natural ဖြစ်တာလေးတွေရှိသားလို့ boys before flower ထဲက အော့ကြောလန်မင်းသမီးထက်တော့ အများကြီးသာရှာပါတယ်လေ မင်းသမီးမျက်နှာကြည့်တိုင်း သူ့နှာခေါင်းကတခုခုလိုနေသလိုပဲ Tree of Heaven ကြည့်ကထဲက ဒီကောင်မလေးနှာခေါင်းပြင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပဲထင်နေတယ်
မဗေဒါ rating ကိုအားကိုးပြီး ပြီးအောင်ဆက်ကြည့်မယ်ကွာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းသားကလဲ ကိုယ့်ရဲ့ celebrity crush ဆိုတော့ ကြည့်ရမှာပဲ ဟိ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းသားက နှုတ်ခမ်းကိုအသားပေးလွန်းလို့ မကြိုက်ဘူးဆိုပဲ သို့သော် အဲ့နှုတ်ခမ်းက သူရဲ့ Trade mark ပဲမလား လူတကိုယ်အကြိုက်တမျိုးပေါ့လေ ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးကိုတော့ ဝိုင်းလဲသဘောကျတယ် သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်မြန်မာကားတွေမှာ ကလေးနဲ့လဲမတူ လူကြီးလဲမကျ အပိုတွေသိပ်လုပ်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်တွေပဲ သတိရမိတယ်
3/01/2015 9:12 PM
ပထမနေ့က မဗေဒါ မင်းသားလေး အိမ်မက် မက်တယ်ဆိုတာနဲ့ အဲ့ကားလေး ကြည့်တာ မနေ့ညကပဲ ပြီးသွားတယ်.. ဒီကားလေးကို သဘောကျတာတခုက အားလုံးနီးပါးက ကိုယ်စီစဉ်ထားတဲ့ အရာတွေကို အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံပြောကြတယ်. အချို့ကားတွေဆို အကြောင်းအရာက တယောက်ပဲသိပြီး အတော်ကြာမှာ နောက်တယောက်က သိသွားတာမျိုး သိပ်မတွေ့ရဘူး မင်းသားက သူ့ဘဝအကြောင်းငယ်တည်းက ဖွင့်မပြောတာတခုကလွဲလို့ပေါ့။
တခုဝန်ခံစရာက မဗေဒါ ဘလော့ကို တိတ်တဆိတ် ဖတ်ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ.. တခါမှ စာမချန်ခဲ့ဘူး ဒါပထမဆုံးပါ ဟိုတနေ့က အားပေးတဲ့သူနည်းလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရေးထားတာတွေ့လို့ တိတ်တဆိတ်အားပေးနေတဲ့သူရှိပါတယ်လို့
3/02/2015 3:32 PM
Post မှာ ၀ိုင်း ကွန်မန့် မလာရင်တောင် ဟာတာတာဖြစ်နေပြီ... BOF ထဲက မင်းသမီးထက်တော့ သာတာပေါ့။ LJS ရဲ့ နှုတ်ခမ်းက love it or hate it ပဲလေ။ ကိုယ်တွေကတော့ ပထမ အုပ်စုထဲ ပါတာပေါ့။ မြန်မာကားက ကလေးတွေက တဗြဲ ဗြဲပဲ ငိုနေတာ...
TZN ရေ ခုလို ကွန်မန့် ချန်ရင် ရေးရတဲ့သူ အားရှိတာပေါ့... နို့မို့ ဆို ဘယ်သူမှ မဖတ်ပဲ ကိုယ့်ဘာကိုယ် စာတွေ ထိုင်ရေးနေရသလိုပဲ။ ကိုယ်နဲ့ ၀ါသနာတူလေးတွေ တွေ့ဆုံ ရင်ဖွင့်လို့ရအောင် ဒီပိုစ့်လေးတွေ ရေးတာဆိုတော့ ၀င်ဆွေးနွေး ရင်ဖွင့်ရင် ကောင်းတာပေါ့။
ဟုတ်တယ်... လူဆိုး ၁ယောက်ပဲ အားလုံးသိပြီး တကားလုံးက နောက်ဆုံမှ သိရတာတို့ ဘာတို့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရိုးလာပြီ.ပြီးတော့ စိတ်ရှုတ်ဖို့လဲ ကောင်းတယ်... TZN ပြောမှ အဲဒါသတိထားမိတယ်။ ကျေးဇူးနော်...
ဒီပိုစ့်ကို ကိုယ့်မှာ သေချာလေး တွေးပြီး ရေးထားရတာ... one like နဲ့ ကွန်မန့်တွေ မတက်လာတော့ တော်တော်တော့ အားပျက်သွားတာ... နောက်လဲ လာဆွေးနွေးပါနော်...
3/02/2015 8:25 PM
မဗေဒါ review အရ ကြည့်ရမဲ့ထဲ ထည့်လိုက်ပြီ
3/03/2015 1:03 PM
ထည့်လိုက် ထည့်လိုက်... ဘာလို့ မကြည့်ရသေးတာလဲ?
3/03/2015 10:18 PM
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ပိုင်း အမြဲ comment ချိန်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ် :)
3/04/2015 8:18 AM
I am now watching.. :) Whichever movies/dramas you recommended, I mark to watch them, little sis.
3/04/2015 3:08 PM
By the way would like to thank to TZN as I copy the comment from TZN ,no Myanmar font on my office PC :-P
3/05/2015 12:44 PM
Thank you so much. I am very happy to know my review can be reference for my readers. Please do leave your footprint when you are on my blog. :D
Comment in English are welcome too.
3/05/2015 2:11 PM
What is your previous comment? "မဗေဒါ review အရ ကြည့်ရမဲ့ထဲ ထည့်လိုက်ပြီ"? It is okay to write comment in English too. thanks again.
3/05/2015 2:12 PM
မဗေဒါ ဘလော့ကို တိတ်တဆိတ် ဖတ်ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ.. Most of the time စာမချန်ခဲ့ဘူး , ဟိုတနေ့က အားပေးတဲ့သူနည်းလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရေးထားတာတွေ့လို့ တိတ်တဆိတ်အားပေးနေတဲ့သူရှိပါတယ်လို့ , :-) I thougt I post it that comment
3/05/2015 3:19 PM